Abantu Basebukhweni | Ukunceda Iintsapho
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBengali IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMarathi IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
“Xa sasinengxaki ethile, umfazi wam waxelela abazali bakhe. Utata wakhe wandifowunela waza wandicebisa ukuba siyicombulule njani. Zange ihle kamnandi kum le nto!”—UJames. *
“Umama womyeni wam uyakuthanda ukuthi, ‘Andisamkhumbuli nje unyan’ am!’ Xa ethetha ngendlela ababengabahlobo ngayo, ndiba buhlungu ngokungathi mna ndafika ndatshata unyana wakhe ndaza ndamshiya ebuhlungu!”—UNatasha.
Ngaba ningakwazi ukuthintela iingxaki zabantu basebukhweni ukuze zinganixabanisi?
Xa abantu betshata, baqalisa intsapho entsha. IBhayibhile ithi xa indoda itshata, “iya kumshiya uyise nonina ize inamathele emfazini wayo.” Naye ke umfazi ushiya abazali aze anamathele endodeni yakhe. Xa etshata, iBhayibhile ithi yena nomyeni wakhe baba “nyama-nye.” Loo nto ibenza babe yintsapho.—Mateyu 19:5.
Umtshato wakho ubaluleke ngaphezu kwabazali bakho. UJohn M. Gottman oyingcali kwezemitshato uthi, “enye yezinto ezenziwa ngumtshato kukwenza indoda nomfazi babe yimbumba. Ukuze nikwazi ukumanyana, kusenokufuneka ningasondeli kakhulu kwiintsapho zenu.” *
Kubathath’ ixesha abanye abazali ukuqhela ukuba umntwana wabo utshatile. Omnye umyeni uthi: “Xa wayeseyintombi, umfazi wam wayesoloko ebuza kubazali bakhe ngaphambi kokuba enze nantoni na. Emva kokuba sitshatile, umama wakhe wabona ukuba kukho omnye umntu ekubuzwa kuye ngoku. Kwakunzima kuye ukuyamkela ke leyo.”
Kuba nzima nakwabanye abasandul’ ukutshata. UJames obekhe wacatshulwa ngaphambili uthi: “Abazali bomntu otshate naye awubakhethi ngokungathi ukhetha abahlobo. Uzibhaqa sele unabahlobo ababini abatsha, uthand’ ungathandi. Bayintsapho yakho ngoku, enoba bakuz’ entloko!”
Ukuba wena neqabane lakho aniboni ngasonye kumba wabazali, hlalani phantsi nize nithethe. Thobelani icebiso leBhayibhile elithi, “funa ukufumana uxolo, ulusukele.”—INdumiso 34:14.
Ukuze nikwazi ukwenza oku, makhe sithethe ngezi meko zimbini. Nganye kuzo kuthethwa ngayo ngokungathi yeyomyeni okanye umfazi. Noko ke, ezi ngxaki zinokwehlela nabani na kuni, ibe amacebiso ekuthethwa ngawo anokuninceda nilungise iingxaki eziliqela ngokuphathelele abazali benu.
Umfazi wakho uthi akwaba ubuvana nonina, kodwa wena ucinga ukuba umama wakhe unochuku.
Zama eli cebiso: Thetha nomfazi wakho ngale nto, uze uzimisele ukugob’ uphondo kwezinye izinto. Eyona nto ibalulekileyo asiyondlela omjonga ngayo umkhwekazi wakho, kodwa yindlela oziva ngayo ngomfazi wakho—owafunga wathi uya kumthanda. Emva kokuba nithethile, makubekho into enye okanye ezimbini oceba ukuzenza ukuze ulungise ubuhlobo bakho nomama womfazi wakho. Qiniseka ukuba uyazenza ezo zinto. Umfazi wakho uya kukuhlonipha nangakumbi xa ebona ukuba uyazama.—Umgaqo weBhayibhile: 1 Korinte 10:24.
Umyeni wakho uthi, eyona nto ibalulekileyo kuwe ngabazali bakho ngaphezu kwakhe.
Zama eli cebiso: Thetha nomyeni wakho ngale ngxaki, uze uzame ukuzibeka ezihlangwini zakhe. Phofu ke, umyeni wakho akafanele akhwelete kuba nje unika abazali bakho imbeko ebafaneleyo. (IMizekeliso 23:22) Sekunjalo, kusenokufuneka umqinisekise ngamazwi nangezenzo ukuba ubaluleke ngaphezu kwabazali bakho. Ukuba uyayibona loo nto, akanakufane acing’ ukuba ukhuphisana nabazali bakho ngothando lwakho.—Umgaqo weBhayibhile: Efese 5:33.
Umfazi wakho ucela icebiso kubazali bakhe kunokuba eze kuwe.
Zama eli cebiso: Thetha nomfazi wakho ngale nto, nize nivumelane ngemida eniza kubabekela yona abazali. Zama ukungabi ngqongqo. Ngaba kusoloko kuphosakele ukuthetha nabazali ngengxaki ethile? Kuthethwa nabo xa kutheni? Le nto ayibi yingxaki xa nivumelana ngemida eniza kubabekela yona.—Umgaqo weBhayibhile: Filipi 4:5.
^ isiqe. 4 Amagama atshintshiwe kweli nqaku.
^ isiqe. 9 La mazwi acatshulwe kwincwadi ethi The Seven Principles for Making Marriage Work.
“Ke yena umfazi, makabe nentlonelo enzulu ngendoda yakhe.”—Efese 5:33.
“Ukuba nengqiqo kwenu makwazeke ebantwini bonke.”—Filipi 4:5.
Jonga Kakhulu Izinto Ezintle
“Kubalulekile ukuvana nabazali beqabane lakho. Ngabo abakhulisa iqabane lakho ibe enoba banawaphi na amakhwiniba, ufanele ubabulele ngokukuzalela isithandwa sakho. Ininzi into onokuyifunda kubo. Ukuba ujonga kakhulu izinto ezintle kubo uze uzenze, uya kuya kude.”—UJessica.
Unako ukunyaniseka emtshatweni kwangaxeshanye uhlonele abazali bakho.